Aragti cusub oo shirkadaha ku saabsan naqshadaynta baakadaha waara | Abuurista khadka tooska ah
Aragti cusub oo loogu talagalay shirkadaha ku saabsan naqshadaynta baakadka joogtada ah
Melisa Perrotta | | Design Graphic, General, dhowr
Sida naqshadeeye leh hamiday ah baakadaha iyo jecel deegaanka, waxaan ku riyoodaa maalinta markii our hababka wax soo saarku waxay noo ogolaaneysaa inaan leenahay heer qashin eber ah. Aragtidayda mustaqbalku waxay rajeyneysaa in hal-abuurnimadeenna, oo gacanta ku haysa caqliga macmalka ah, internetka waxyaabaha iyo saynisku agabyada ay naga caawin doonaan inaan horumarinno alaabada leh meertada nolosha si loo yareeyo heerkayaga saameynta deegaanka.
Dad badan oo naqshadeeyayaal ah ayaa soo bandhigaya a hab waara ujeedadooda iyo geeddi-socodka horumarinta mashruuca. Si kastaba ha noqotee, kuma filna in dhowr naqshadeeye ay qaataan mas'uuliyadan. Dareenkan, waxaa lagama maarmaan ah in habka waara loo tixgeliyo sida xaqiiqda, wax muuqda oo aan ikhtiyaar ahayn. Oo inkasta oo ay u muuqato in maanta aan ula dhaqmayno mas'uuliyad weyn; runtu waa taa waxaa jira ballanqaad aad u yar oo soo saarista baakadaha waara.
Mawjadaha baakadaha waara waxay soo baxday 2000 iyadoo la leeyahay "Bayaanka Xuquuqda Meeraha ee Hannover". Intii lagu guda jiray bandhiggan caalamiga ah, xubnaha shirkadda «William McDonough Architects» waxay dejiyeen mabaadi'da qaabeynta waarta. Laga bilaabo halkan, xirfadleyda naqshadeynta waxay bilaabeen inay la kulmaan cadaadis sii kordhaya si ay wax uga qabtaan arrintan.
Dhinaca kale, sanadihii ugu dambeeyay, a wacyiga deegaanka cusub ee gacanta jiilalka cusub. Jilayaashan bulshada waxay uga go'an tahay sidii hore weligood sababaha deegaanka, bulshada iyo bani'aadamnimada. Sababtaas awgeed, haddii aan dooneyno inay shirkadeennu tartan la gasho oo ay ka dhex muuqato suuq buuxa; Waa lagama maarmaan in la qaato qaab u dhigma kan qiimaha macaamiisha cusub.
1 Waa maxay baakad waara?
2 Maxaa lagu kasbaday?
2.1 Keydi lacag
2.2 Kordhi shirkadda
2.3 Ku darso warshadaha maxalliga ah
Waa maxay baakad waara?
Marka hore waxaa muhiim ah in la fahmo qeexitaanka "waara" ama "waari". Wax soo saarka dhaqanka waa mid waara marka ay Horumarku wuxuu damaanad qaadi karaa xasilloonida deegaanka, bulshada iyo dhaqaalaha, isagoo sii jiraya waqti ka dib. Sidan oo kale, habka wax soo saar ee wanaag, adeeg ama khibrad ayaa tixgelin doona mid kasta oo ka mid ah xaaladaha nolosha ee waxtarka u leh badeecada, taasoo ka dhigaysa mid loo siman yahay, loo dulqaadan karo oo lagu noolaan karo.
Isbahaysiga Baakadaha Joogtaynta ah ayaa ku qeexaya waxyaabaha soo socda laga bilaabo:
Es faa'iido leh, ammaan ah oo caafimaad leh shaqsiyaadka iyo bulshada inta ay nool yihiin oo dhan.
Buuxiyo shuruudaha waxqabadka iyo qiimaha ee suuqa ay leedahay.
Waa la helay, la soo saaray, la raray oo dib loo warshadeeyay iyadoo la adeegsanayo tamar dib loo cusboonaysiin karo.
Kor u qaad qalabka dib loo isticmaali karo ama dib loo isticmaali karo wuuna adeegsadaa.
Waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada wax soo saarka nadiifka ah iyo u hogaansanaanta xeerarka dhaqanka wanaagsan.
Waxaa laga sameeyay qalab caafimaad leh inta lagu jiro wareegga nolosha.
Waxaa loo qaabeeyey si jir ahaan ah tayadoo isticmaalka qalabka iyo tamarta.
Waxaa si wax ku ool ah loo soo kabsaday in loo isticmaalo wareegyada warshadaha ama noolaha wareeg xiran.
Maxaa lagu kasbaday?
Marka laga eego xagga aragtida ganacsiga waxay u egtahay madax xanuun ay ku khasban tahay dadaallada cagaaran. Waa wax la fahmi karo in milkiilayaasha SME ay u maleyn karaan in ficiladani ay kaliya u abuuri doonaan kharashyo aan loo baahnayn shirkadooda. Si kastaba ha noqotee, shirkadahaani waxay u baahan yihiin inay lahaadaan kartida lagu horumarinayo aragti caalami ah oo leh aragti weyn oo u oggolaanaysa iyaga inay ballaariyaan himilooyinkooda.
Dib ugu noqoshada wixii aan horay u soo sheegnay ee ku saabsanaa isbedelka qiimaha macaamiisha hadda jirta. Haddii shirkaduhu leeyihiin shaqadooda ugu weyn qanacsanaanta macaamiishooda; markaa, waa iyaga oo danahooda gaarka ah doonaya inay iswaafajiyaan qiimayaashooda. Dareenkan, way awoodaan u isticmaal horumar waara istiraatiijiyad tartan ah. Sidan ayaa ay awoodi doonaan inay ka soocnaadaan noocyada aan ka faa'iideysan ilahaan.
In kastoo aysan u ekaan karin, naqshadeynta baakada deegaanka Kaliya ma caawin karto hoos u dhigida qiimaha baakadaha iyo baakadaha; laakiin sidoo kale hoos u dhaca ku yimaada qiimaha wax soo saarka isla badeecadaha. Furaha ayaa ah in la helo waaxda naqshadeynta oo awood u leh inay si toos ah ula shaqeyso qeybaha kale ee shirkadda. Sidan oo kale, habab badan oo hal abuur leh ayaa loo fulin karaa taas oo u oggolaanaysa tixgelinta wajiga hore ee wejiga ugu dambeeya ee habka wax soo saarka.
Si qayb kasta oo shirkadda ka mid ahi waxay si firfircoon uga qayb qaadataa abuurista ama halkii la wada abuuri lahaa badeecada, way fududahay in la diyaariyo go'aamada xiga ee ay yeelan doonaan. Laakiin wax kasta oo ka sarreeya, waxay kaa caawin doontaa yareynta hawlgalka, maaddada iyo waqtiga kharashka iyadoo la abuurayo alaab leh hanaan dhammaystiran.
Tusaale ahaan, ku dar naqshadeeyaha baakadka ee fikradda alaabta Waxay ka caawin kartaa iyaga inay indha indheeyaan baakad ka wanaagsan oo ku bixinaysa isticmaalka warqad una soo bandhigaysa weelka santuuqa. Tani waxay keydineysaa walxaha iyada oo la siinayo calaamadda, iyo saadka iyadoo la hagaajinayo booska lagu keydiyo.
Sida laga soo xigtay a daraasad caalami ah oo ay fulisay shirkadda latalinta ee Nielsen, seddex ka mid ah afartii Millennials ayaa diyaar u ah inay lacag badan ku bixiyaan wax soo saarka muujinaya qiyamka joogtaynta. In kasta oo waxa ugu layaabka badnaa ay ahaayeen shaxda ay soo saareen jiilka Z, kuwa da'doodu u dhaxayso 15-20, oo ka koray 55% 2014 ilaa 72% 2015. Dhinaca kale, daraasad ay samaysay Isgaarsiinta Kone sanadkii 2015 waxay ogaatay in 84% macaamiisha ay raadiyaan badeecooyin masuul ah.
Iyadoo lala kulmay xaaladdan cusub, isticmaalka baakadaha waara waxay gacan ka geysan karaan ilaalinta iyo ballaarinta macaamiisha shirkadaha. Waxay u kala qaybin karaan faylalkaaga wax soo saarka si ay uga dhigto mid soo jiidasho leh dadka isticmaala cusub. Xaqiiqdu waxay tahay haddii aan dooneyno inaan tartan sii ahaano waxaan u baahanahay qiyamkeenna inaan ku beddelno kuwa macaamiisheenna ah.
Ku darso warshadaha maxalliga ah
Baakadaha waara waxay sidoo kale u baahan yihiin helitaanka agabyada laga helo deegaanka si ay ula kulmaan bulshada. Dareenkan, wuxuu u shaqeeyaa darawal ahaan wax soo saarka maxalliga ah iyo kan gobolka. Tani waxay ka dhigan tahay in shirkadaha sida joogtada ah u shaqeeya, marka loo eego, ay ku jihaysan doonaan sidii ay alaab uga heli lahaayeen bulshadooda ugu dhow. Sidan oo kale, shirkadaha kala duwan Waxay gacan ka geysan doonaan hagaajinta dhaqaalaha maxalliga ah iyagoo is taageeraya.
Dhinaca kale, iibinta Km. 0 alaabtu waa faa iido weyn oo tartan ah, maaddaama ay soo jiidanayso bulsho wacyigelin bulsho leh, marka lagu daro hoos u dhigidda kharashyada iyo yareynta saameynta deegaanka ee saadka awgeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Aragti cusub oo loogu talagalay shirkadaha ku saabsan naqshadaynta baakadka joogtada ah
Oscar Magdalena Lavandeira dijo
Jawaab Oscar Magdalena Lavandeira
Telefoonka Fudud 2: Nooca cusub ee anti-casriga
Istiikaarada magaalooyinka ayaa ah qaab kale oo loogu sawiro rinjiyeynta